Kormeerkii Waxbarshada Degmada Boosaso oo Maalintii 6aad ka socda Goobaha Waxbarashade Magalada Boosaso. – Ministry of Education in Puntland
21\_12\_2017-Maalintii 6aad kormeerka Waxbrashada Degmada boosaso oo si xowli ah ku socda ayaa saaka aroortii teamamkii shaqooyinka waxay kala aaden dugsiyada jadwalka ugu jiray.
Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Boosaso Abdulahi Abshir Xasan iyo Gudoomiyaha Waxbarshada Gobolka Bari shamis Muuse iyo qayb ka mid ah kormeerayaasha Gobolka iyo shaqaalaha dhexe ayaa howshoodii caadiga ah ka sii waday maalintii 6aad ee kormeerka.
intii kormeerka iyamahan socaday araday iyo maamul badan badan ayaa jah wareeray.
Arday badan ayaaa waxay ku noqdeen fasaladii ay ka soo booden iyagoo si khaldan ku yimi iskuulada ay hada joogeen
Go’aanka Kormeerkan ayaa go’aankisa saxda ah Waxaa gaaraya Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare bishaan gudeheeda.
Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare ayaa liiska soo gudbinaysa ardayda aan loo ogaalan doonin inay fariistan imtixanka Dugsiyad sare iyo iskuulada tayada xun ee degmada Boosaso.
Wasaaradad Waxbarashada ayaa ku howlan hagaajinta iskuulada iyo arday tayo leh inay soo baxaan.
Kormeerkaan oo ka kooban saddex qeybood, ayaa ka socda Magalada Boosaso, si waaxda tayadhowrka waxbarashadu u ogaato halka ay waxbarasharadu marayso degmada Boosaso.
1- In mas’uuliyiiinta kor ku xusani ay sameeyaan kormeer buuxa oo ay ugu kuurgalayaan cidda ka danbeysa sameynta bedellada iyo shahaadooyinka been-abuurka ah iyo dugsiyada dhiirigalinaya falalkaas xun.
2- Ciddii lagu helo iyada oo falkaas ka shaqeynaysa ama dhiiri galinaysa waxaa laga qaadi doonaa tallaabada ku haboon oo heer wasaaradeed ah.
3- Ardaygii aan silsiladda ama jaraanjarada Waxbarashada aan raacin ama soo booday ma fariisan doono imtixaaanka shahaadiga ah.
4- Goobta in wax lagu barto loo furanaayo oo aan laga fakirin haboonaantooda xag caafimaad iyo xag waxbarsho toona.
5- Dadajin iyo bootin laga gadaayo ubadka iyo waalidka aan waxbarshada fahamsanayn.
6- Macallimiin jaban oo tayadoodu liidato oo laga soo waarido meelo ka baxsan waddanka,si dhaqaale loo abuurto